मैले पार्टी परित्याग गरेसँगै विवेकशील नेपाली र साझाबीच फेरि एकताको प्रक्रियाले पनि तीब्रता पायो । यी दुई दलको एकताले पाएको तीब्रतालाई मसँग जोडेर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, ममाथि आरोप लगाउन सुरु गरिएको छ । त्यसो त ०७५ पुस २७ मा पार्टी फुटेदेखि नै ममाथि यो आरोप लाग्दै आएको थियो । म पार्टीबाट बाहिरिएसँगै विवेकशील र साझाबीच एकताको प्रक्रिया सुरु भएपछि फेरि एकपटक यसमा मलाई जोडेर टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
विवेकशीलका केही साथीहरुले म पार्टीमा भएकै कारण पार्टी फुटेको र अहिले म पार्टीमा नभएकै कारण फेरि मिल्ने वातावरण सिर्जना भएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
आफूमाथि लागिरहेका आरोप र लान्छना निराधार र अराजनीतिक भएकाले यो विषयउपर मलाई खण्डन गर्न मन थिएन । यो विषयमा मन नहुँदानहुँदै पनि बोल्दै छु । नत्र मलाई यी आरोपले हाँसोबाहेक केही उठ्दैन ।
विवेकशील र साझा एकीकरण भएर बनेको विवेकशील साझामा पहिलो दिनबाटै मैले आफ्ना असहमति राख्दै आइरहेको थिएँ । विषेशगरी विवेकशील साझाको कार्यशैली र सिद्धान्तप्रति मेरो असहमति थियो । हामीलाई मानिसहरुले तिमीहरु क्लब हौ, एउटा अभियान मात्रै हौ, एनजिओ हौ इत्यादि भनेर गरिरहेको तर्कमा सत्यता छ । हामीले अब राजनीतिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । साँच्चै, हामीले गर्ने राजनीति एउटा क्लब र एनजिओ, एउटा सेलेब्रिटी र अभियानले गर्ने जस्तो भयो । हामीले एउटा यस्तो वैकल्पिक शक्ति बन्नु छ, जसले आममानिसका इच्छा–आकांक्षालाई डेलिभर गर्न सकोस् । आममानिसको विश्वास जाग्ने गरी हामीले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो शैली परिवर्तन गरौँ, काठमाडौंबाट बाहिर निस्किऔँ, कहिलेकाहीँ माइतीघरमा गएर पुराना दल र नेतालाई सराप्न छाडौँ । उनीहरुलाई सराप्न उनीहरुकै पार्टीका कार्यकर्ता काफी छन्, हामीले त आममानिसका इच्छा–आकांक्षा डेलिभर गर्न सक्ने गरी साँच्चिकैको वैकल्पिक बन्नुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म शुभचिन्तकलाई झुक्याउने काम मात्रै गरेका छौँ भनेर असहमति राख्दै आइरहेको थिएँ ।
केही गरी सरकारमा पुगिहाले भने पनि यिनीहरुले जनताका इच्छा र आकांक्षाअनुरुप डेलिभरी गर्न सक्ने छैनन् । अहिलेका दलको भन्दा फरक हविगत हुने छैन, यिनीहरुको पनि । अहिले हाम्रा केही सांसद बाग्मती प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ, खै त उहाँहरुले के फरक काम गर्नुभएको छ त ? त्यसैले आफूले आफैँलाई असल भनेर, आफूले आफैँलाई माला लाएर आत्मरतिमा नरमाउनुहोस्, मेरो विनम्र अनुरोध छ, उहाँहरुलाई ।
फरकधारले डा. सूर्यराज आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित मिति : भदौ २४, २०७७ बुधबार १३:५९:४६, अन्तिम अपडेट : भदौ २४, २०७७ बुधबार १४:२६:३७